HETSIKA IRAY IHANY ISIKA : Nomarihina Minisiteran’ ny serasera sy kolontsaina tao Toamasina
Hetsika efatra sosona no nomarihin’ny Minisiteran’ ny serasera sy kolontsaina tao Toamasina, ny sabotsy 9 novambra lasa teo. 11 novembre 2019
Ny voalohany, dia ny atrikasa momba ny hidirana ao anatin’ny TNT( Télevision Numérique Terrestre). Ho an’i Madagasikara, dia ny volana jona 2020 no tokony fe-potoana farany hirosoana ao anatin’ny TNT io. Izany indrindra no antony nanaovan’ny minisitera atrikasa ho an’ireo tompona haino aman-jery. Tao Toamasina no fanombohana. fotoana izay nanasana ireo tompona haino aman-jery avy amin’ny faritra telo : Alaotra-Mangoro, Atsinanana, Analanjirofo. Mbola hitety ireo renivohi-paritany rehetra ny ministera.
Izao no natao mba tsy ho tompon-trano mihono sady koa ho famolavolana sahady ireo lalàna hifehy ny TNT eto amintsika. Rehefa mihatra mantsy io, dia tsy hisy haino aman-jery hanana olana amin’ny fiparitahana manerana an’i Madagasikara intsony.
Taorian’io atrikasa io, dia nisy ny fametrahana vatofehizoro an’ ilay Tranoben’ny serasera sy kolontsaina ao Toamasina.
Tranobe izay natsangana ho fampiroboroboana ny lafiny serasera sy kolontsaina ary ho sehatra ho an’ireo mpanakanto. Ho an’ny toerana fanaovana fampisehoana dia hahitana seza 550. Hisy ihany koa ny efitra fanaovana fampiran-tiana sy efitra natokana ho an’ireo mpanao gazety.Tsara ny manamarika fa io no Tranoben’ny serasera sy kolontsaina faha-4 naorin’ny Ministeran’ny serasera sy kolontsaina eto Madagasikara.
Lanonana fahatelo notarihin-dRamatoa Minisitra Lalatiana Andriatongarivo ny fanamarihana ny fanombohan’ny asa fanavaozana “Maison Nathan”. Ity trano ity izay manan-tantara tokoa ao Toamasina. Trano niorina voalohany tao amin’ny fokontany Ampasimazava tamin’ny 1928 ary mifanila amin’ny Place Bien Aimé.
Sambany izao asa fanamboarana izao. Hatao Mozea rehefa vita. Lanonana faha-4 natao tao Toamasina ny sabotsy 9 novambra ny hetsika « Iray Ihany Iska » ( 3I).
Ity hetsika ity izay ny fandaharanasan’ny minisitera izay miompana amin’ny fitaizana sy fanentanana ny olom-pirenena rehetra hamerina kolontsaina vaovao lavitry ny fankahalana sy ny fivakivakisana na dia eo aza ny fahasamihafana, na ara-piaviana, ara-pirazanana, ara-pinoana, ara-tsaranga, ara-bolonkoditra, ara-batana, ara-bola sy harena, ara-pirehan-kevitra,…
Karnavaly lehibe no nanamarihana izany izay nandraisan’ny sokajin’olona maro anjara.
"Salama sy matanjaka tsara ny tenako ary tsy mitsoaka ady " NAMALY NY TSAHO ANENJEHANA AZY RAJOELINA (166) 2 juillet 2020 "Mbola betsaka ny kolikoly tsikaritra eny amin’ny sakana ara-pahasalamana" VOIFIRAISANA (71) 2 juillet 2020 Sekoly tsy miankina iray eny Ambatolampy Antehiroka tsy manara-dalàna FEPETRA COVID-19 (63) 30 juin 2020 Distrika maro no efa misitraka fampandrosoana FAMPANANTENANA NATAON’NY FILOHA (59) 2 juillet 2020 Mbola tsy raharahian’ny vahoaka ny Covid-19 FAHASALAMANA AO MAHAJANGA (59) 2 juillet 2020 Zaza 15 volana sy olon-dehibe roa indray voan’ny Covid-19 FARITANIN’I MAHAJANGA (56) 30 juin 2020